Izicelo - iZhejiang Tiantai Jierong New Material Co, Ltd.
Emva kweminyaka engaphezu kwe-10 yemvula yetekhnoloji, i-nylon yethu, i-PET, kunye neengxowa zeti zefayibha zombona azinetyhefu, azinabhakteria, kwaye ziyanyamezela ubushushu ngokuhlolwa kukhuseleko lukazwelonke, sele zikwinqanaba elikhokelayo lasekhaya.
Umshicileli weSilk Screen
Amalaphu zethu umnatha zikwasetyenziswa ngokubanzi endle screen yoshicilelo umnatha.
Umzekelo: ishishini elektroniki, iiseramikhi kunye neetayile, ishishini ukupakisha, umzi mveliso weglasi, umzi mveliso wempahla eyolukiweyo, umzi mveliso wefotovoltaic, njl.
I-Organza luhlobo lomsonto wokukhanya onombala ocacileyo okanye oguqukayo. Abantu baseFransi basebenzisa i-organza njengezinto eziphambili ekuyileni iilokhwe zomtshato. Emva kwedayi, umbala uyakhanya kwaye ukuthungwa kukhanya kufana neemveliso zesilika. Inokusetyenziswa njengamakhethini, iilokhwe, izihombiso zeKrisimesi kunye neeribhoni.
Umzi mveliso wokuhombisa uyilo ngoku uneemfuno eziphezulu neziphezulu zobuhle bendawo. Kukhetho lwezinto zokuhombisa zokwakha, kuyafuneka kwakhona ukuba uhlangane nesiseko esithile sobugcisa kumgangatho ophezulu. Kwaye umnatha wethu welaphu unokusetyenziswa ngokubanzi kwizicelo zokwakha.
Ilaphu lethu le-mesh linokuhlala kwindawo kwicandelo lemveliso yezemveliso.
Ukubandakanya: amacebo okucoca ulwelo kunye neebhegi zecandelo lemveliso yeekhemikhali, icandelo lokutya, ukhuselo lokusingqongileyo, isayensi yobomi, njl.